Ciidamada Dowlada Kenya oo Howlgalo ka sameeyay Mandheere ka dib… – SBC
Ciidamada Dowlada Kenya oo Howlgalo ka sameeyay Mandheere ka dib…
Posted by Webmaster on February 29, 2012 Comments
Ciidamada Amaanka Dowlada Kenya ayaa maanta ka bilaabay deeganka Mandheera ee gobolka waqooyi bari Kenya, kaasi oo sida ay sheegeen saraakiishoodu logu golleeyahay amaan xaqiijin.
Xaafadaha qaar ee Mandheera ayaa ciidamada siweyn loogu arkayay maanta iyagoo howlgalo baaritaan ka wada, waxaana ay qab qabasho kula dhaqaaqayeen dhalinyarada ama inta ay da’dooda ka yartahay 30sano.
Sarkaal sare oo ka tirsan Laanta Dembi baarista ee ciidanka Kenya ayaa sheegay in ku dhowaad 18 qof oo lala xiriirinayo ku lug lahaanshaha weerar shalay lagu qaaday xarun ay ka degen yihiin Mandheera ay iminka ku xiran yihiin saldhiga islamarkaana ay islamarkaana ay ku socdaan su’aalo weydiin.
Waxa uu intaasi raaciyay Sarkaalku in ragaasi la soo taagayo maxkamad intii aan dembi laheyna la sii deyn doono waqtiyada soo socda.
Shalay ayaa magaalada Waxaa ka dhacay Weerar ay kooxo ku hubeysan Baastoolado iyo Bambooyin ay ku qaadeen ciidamo Kenyati ah oo maraayay suuqaweyn sariflaha ee Mandheera iyagoona halkaasi ay ku dileen mid ka mid ah ciidamada Militeriga.
Ma ahan marki ugu horeysay oo ay ciidamada Kenya Mandheera ka sameeyaan howlgalo ceynkan oo kale ah iyadoona sidoo kale aysan aheyn markii ugu horeysay oo weerar lagu qaado ciidamada Kenya ee Halkaasi ku sugan.